တပ်မတော် (ရေ) - ဝီကီပီးဒီးယား
Myanmar Navy / Burmese Navy
၁၉၄၇ - လက်ရှိ
ယနေ့ခေတ် တပ်မတော် (ရေ) သည် မြန်မာ့ တပ်မတော် တွင် ပါဝင်ပြီး ရေတပ်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား စစ်မှုထမ်းအင်အား ၁၉၀၀၀ ခန့်ဖြင့်အမှုထမ်းလျှက်ရှိသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် တပ်မတော် (ရေ) သည် စစ်ရေယာဉ်ပေါင်း ၁၂၂ စီးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မတိုင်မှီခန့် ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုများ နိုမ်နှင်းရာတွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ရေ ၏ထင်ရှားသော အခန်းကဏ္ဍမှာ အခြား တပ်နှင့် လေတပ် ထက်များထက်စာလျှင် အလွန်နည်းပါးလှသည်။ တပ်မတော်ရေသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ယခင်အချိန်ရော ယခုကာလအထိတည်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့် မကြာသေးမီကာလကပင် မြန်မာ့ရေပိုင်နက်ခြိမ်ခြောက်မှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ထပ်မံတိုးချဲ့တည်ဆောက်ထားခဲ့သည်။
၁.၁ ကိုလိုနီခေတ် မတိုင်မီ
၁.၂ တိုက်ပွဲများနှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်
၁.၄ ၁၉၅၀ ခုနှစ်
၁.၅ ၁၉၆၀ ခုနှစ်
၁.၆ ၁၉၇၀ ခုနှစ်
၁.၇ ၁၉၉၀ ခုနှစ်
၁.၈ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း
၂ အရပ်သားများအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများ
၃ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း တပ်မတော်ရေ၏ အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိများ
၄ ရေတပ် စခန်း ဌာနချုပ်များ
၆ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး ရေတပ်အခြေစိုက်
၇.၁ ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်များ (Frigate)
၇.၂ ကော်ဗက် စစ်ရေယာဉ်များ (Corvette)
၇.၃ FAC - Stealth
၇.၅ FAC - Submarine Chaser
၇.၆ အမြန်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ် (FAC - Missile)
၇.၇ အမြန်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ် (FAC - GUN)
၇.၈ Large Patrol Combatants
၇.၉ ကမ်းရိုးတန်း ကင်းလှည့်ရေယာဉ်များ
၇.၁၀ Cruiser Patrol Craft
၇.၁၂ Coastal Land Craft Mechanized
၇.၁၃ Coastal Land Craft Utility
၇.၁၄ Coastal Survey Ship
၇.၁၅ Coastal Logistics and tanker Ship
၇.၁၇ Floating dry dock
၇.၁၈ Unmanned Surface Vehicle - USV
မြန်မာဘုရင့်ရေတပ်တော်တွင် မြစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ်များ အဓိကပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိကတာဝန်များမှာ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအား ထိန်းချုပ်ထားရန်ဖြစ်ပြီး ရှေ့တန်းစစ်သည်များအား တင်ဆောင်လာသော သင်္ဘောများကို ကာကွယ်ပေးရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ယင်းစစ်သင်္ဘောများသည် သေနတ်ကိုင်တပ်သား ၃၀ နှင့်အထက် တင်ဆောင်နိုင်ပြီး ၆-၁၂ ပေါင်ဒါ အမြောက်များတပ်ဆင်ထားသည်။ ၁၈ ရာစုအလယ်ခန့်တွင် ရေတပ်တော်သည် ဥရောပနှင့်အခြားလူမျိုးများပါသည့် ပင်လယ်ပျော်သင်္ဘောနှင့် ဥရောပနှင့်အခြားနိုင်ငံခြား သင်္ဘောသားများထံမှ နည်းနာများကို သင်ယူဆည်းပူးလေ့လာပြီး ယိုးဒယား၊ ရခိုင်တိုက်ပွဲများအတွက် စစ်သည်တော်များ ပို့ဆောင်ရန် အသုံးချခဲ့သည်။
ထိုအချိန်က ရခိုင်နှင့် မွန်တို့သည် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် နေထိုင်သည့်အလျောက် ယင်းတို့၏ စစ်သင်္ဘောများ၊ တိုက်ခိုက်ရေးနည်းပညာများသည် မြစ်အတွင်း၌သာအတွေ့အကြုံရှိသော မြန်မာတပ်များ၏ သင်္ဘောများထက် သာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၁၅ ရာစုမှ ၁၇ ရာစုနှစ်အတွင်းတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ကမ်းရိုးတန်းများအား သိမ်းပိုက်ထားသည့် ရခိုင်ဘုရင့်ရေတပ်တော်၏ စွမ်းအားသည် အလွန်ကြီးကျယ်ခံ့ညားခဲ့သည်။
မြန်မာ့ ရေတပ်ကို ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ရေ အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော်လည်း အလွန်သေးငယ်၍ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင် ဗြိတိသျှ မဟာမိတ်တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ရေတပ်ကို လူ ၇၀၀ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပထမတွင် သင်္ဘောအုပ်စုမှာ အနည်းငယ်သာ ပါဝင်သော်လည်း ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဗြိတိသျှတော်ဝင်ရေတပ်၏ အစီအစဉ်အရ သင်္ဘောအချို့ကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် USB Mayu, မြစ်တွင်းတိုက်သင်္ဘောနှင့် ကမ်းတက်အမြောက်ကြီးလေးလုံးတို့ပါဝင်သည်။ ၂၅ပေါင်ဒါ(၈၈မီလီမီတာ) ၂လုံးနှင့် ၂ပေါင်ဒါ (၄၄ မီလီမီတာ) စက်သေနတ်များတပ်ဆင်ထားသည့် အပြင် ထိုကမ်းတက်သင်္ဘောများကို ထောက်ပံ့ရေး လက်နက်တပ်ယာဉ်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၅၁ ခုနှစ်အတွင်းတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် နှစ်ဖက် စစ်ရေးနားလည်မှုအစီအစဉ်အရ ကမ်းရိုးတန်းစောင့် သင်္ဘော ၁၀ စင်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှု ပေါင်းစုံကို နှိမ်နင်းရာ တိုက်ပွဲများအတွင်းတွင် တပ်မတော်ရေသည် အဓိကနေရာမှ လုပ်ရှားခဲ့သည်။ တပ်မတော်ရေသည် ခုခံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးတာဝန်များ၊ အစောင့်အရှောက်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ သယ်ယူရေး၊ စစ်သည်များသယ်ယူရေးများနှင့် လိုအပ်လျှင် ပစ်ကူများပေးရေးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများနှင့် ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သော မော်လမြိုင်မြို့ကို ကရင်သောင်းကျန်သူတို့ သိမ်းပိုက်ထားချိန်တွင် တပ်မတော်ရေ၏ အဓိက တာဝန်ယူ လှုပ်ရှားမှုကြောင့်သာ သက်သာရာ ရခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင် တပ်မတော်ရေ၏ ကင်းလှည့်ရေယာဉ်တစ်စင်းသည်သာ ကရင်သောင်းကျန်းသူများ၏ လက်ချက်ဖြင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်ရေသည် အရေးကြီးသည့် ကုန်းတွင်းပိုင်း ရေကြောင်းလမ်းများတွင် ကြီးမားသော အတားအဆီး မရှိဘဲ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၆-၅၇ ခုနှစ်အတွင်းတွင် တန်ချိန် ၅၀ ရှိသည့် မော်တာတော်ပီဒို/မော်တာ စက်သေနတ်တပ် အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်သော Saunders-Roe Dark class အမျိုးအစား ကမ်းရိုးတန်းစောင့် ကင်းလှည့်ရေယာဉ် ငါးစင်း၊ တန်ချိန် ၁၀၄၀ ရှိ Algerine class minesweeper အမျိုးအစား မိုင်းရှင်းရေယာဉ်အဟောင်း တို့ကို ဗြိတိသျှတို့ထံရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၅၀-၆၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် PGM အမျိုးအစား ကမ်းရိုးတမ်းစောင့် ကင်းလှည့်ရေယာဉ် ခြောက်စင်း၊ CGC အမျိုးအစား ကမ်းရိုးတန်းစောင့် ကင်းလှည့်ရေယာဉ် ၇ စင်း ကို တပ်မတော်ရေသို့ ရောင်းချပေးခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်ရေတပ်၏ တန်ချိန် ၆၄၀ PCE-827 class တိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ် နှင့် တန်ချိန် ၆၅၀ Admirable class minesweeper အမျိုးအစား မိုင်းရှင်ရေယာဉ်တို့ကို ရရှိခဲ့ပြီး ၎င်းယာဉ်များသည် ၁၉၄၀ ခုနှစ်အလယ်ခန့် တပ်တော်ဝင်အသုံးပြုထားသော ယာဉ်အဟောင်းများဖြစ်သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သို့ မြစ်တွင်း ကမ်းရိုးတန်းစောင့်ရေယာဉ်ငယ် ၆ စင်းတို့ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ယူဂိုဆလားဗီးယားထံမှ Y-301 အမျိုးအစား စက်သေနတ်တပ် ရေယာဉ် ၁၀ စီးအပြင် Michao အမျိုးအစား ကမ်းရိုးတန်းစောင့်ကင်းလှည့်ရေယာဉ် ၂၅ စီးရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်ရေသည် ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံ အကူအညီဖြင့် စစ်ရေယာဉ်များ ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ တွင် တန်ချိန် ၄၀၀ ရှိ နဝရတ် အမျိုးအစား ကော်ဗတ် ရေယာဉ်နှစ်စင်းကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်တွင် အမှုထမ်းစေခဲ့သည်။ လက်နက်အနေဖြင့် ၂၅ပေါင်ဒါ သေနတ်နှင့် ၄၀ မီလီမီတာ ဘိုဖော်စ် လေယာဉ်ပစ် သေနတ်တို့ တပ်ဆင်ထားသည်။ မြန်မာသင်္ဘောကျင်းများမှ ကမ်းရိုးတန်းစောင့် ရေယာဉ်ငယ် အချို့နှင့် ကမ်းတက်ရေယာဉ်အချို့ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကမ်းတက်ရေယာဉ်နှင့် အရန်သင်္ဘောများကို အော်လီကွန် ၂၀ မီလီမီတာ အမြောက်များ၊ ၄၀ မီလီမီတာ လေယာဉ်ပစ်သေနတ်များ နှင့် စက်သေနတ်ကြီးများကို တပ်ဆင်ထားသည်။
တပ်မတော်ရေ၏ စစ်အင်အားတို့ချဲ့မှုသည် ၁၉၅၀ ခုနှစ်နှင့် ၆၀ အကြားတွင် အလွန်လျင်မြန်သော်လည်း ယာဉ်အအိုအဟောင်းများ၏ ပျက်စီး ယိုးယွင်းမှုများကြောင့် အရှိန်အဟုန်နှေးကွေးလာခဲ့ရပြီး ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် မဆလ အစိုးလက်ထက် ရေတပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမတိုင်မီအထိ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှ Carpentaria အမျိုးအစား ကမ်းနီး ကင်းလှည့်ရေယာဉ် ခြောက်စင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ၁၂၈ တန် Swift အမျိုးအစား ကမ်းရိုးတန်း ကင်းလှည့် ရေယာဉ် ၃ စီး၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံလုပ် ၃၈၅ တန် Ospery အမျိုးအစား ကမ်းဝေး ကင်းလှည့်ရေယာဉ် ၃ စီးတို့ ရရှိခဲ့သည်။ Swift နှင့် Ospery အမျိုးအစား သင်္ဘောများသည် ၄၅၀၀ မိုင်နှင့် ၁၈၀၀ မိုင်ခန့် အသီသီးရောက်ရှိနိုင်ပြီး အော်လီကွန် ၂၀ မီလီမီတာ အမြောက်များနှင့် ၄၀မီလီမီတာ လေယာဉ်ပစ် စက်သေနတ်များ တပ်ဆင်ထားသည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစောပိုင်းနှစ်များတွင် တပ်မတော်ရေသည် US PGM အမျိုးအစား ကင်းလှည့်ရေယာဉ်ကို အခြေခံ၍ ၁၂၈ တန် PGM အမျိုးအစား ကင်းလှည့်ရေယာဉ် ၃ စင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုသင်္ဘောတိုင်းတွင် ၄၀ မီလီမီတာ လေယာဉ်ပစ်သေနတ် နှစ်လက်နှင့် ၁၂.၇ မီလီမီတာ စက်သေနတ်ကြီး ၂ ခုတို့ တပ်ဆင်ပေးထားသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်ရေသည် ဒုံးတပ် အစောင့်ရေယာဉ် ၆ စီးနှင့် ရေငုပ်သင်္ဘောဖျက် သင်္ဘော ၁၀ စင်းတို့ကို တရုတ်ထံမှ ဝယ်ယူခဲ့သည်။ တပ်မတော် ရေသည် ၇၇ မီတာ ကော်ဗတ် ရေယာဉ် နှစ်စင်း(771 နှင့် 772) နှင့် အမြန်သွားတိုက် ရေယာဉ် လေးစင်း(551-554) တို့ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် တပ်မတော်ရေယာဉ် ၂၅ စီးခန့် နစ်မြုပ်ခဲ့ရပြီး စစ်သားအချို့နှင့် မိသားစုဝင်များပျောက်ဆုံး သို့မဟုတ် သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု စာရင်းပြုစုခဲ့သည်။ အရာရှိ ၃၀ ခန့်နှင့် အမှုထမ်းပေါင်း ၂၅၀ ခန့် ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်း ကြေညာထားပြီး ဟိုင်းကြီးကျွန်းရှိ ပမ္မဝတီ ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်၊ ဗိုလ်တထောင် သန်လျက်စွန်းရှိ ဧရာဝတီ ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ် နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ ဓညဝတီ ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်တို့၏ကွပ်ကဲမှုအောက်၌ရှိသော စစ်ရေယာဉ် ၂၅ စင်းသည် မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည် ဟု ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ယက်က ဖော်ပြထားခဲ့သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် စိန့်မာတင်ကျွန်း ကမ်းရိုးတန်းတွင် တပ်မတော်ရေ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ချ် လူမျိုး တံငါသည် ၅ ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ် မေလတွင် ဗိုလ်မှူး ဇော်မင်း ဦးဆောင်သော တပ်မတော်ရေ ၏ တပ်မသည် ခရစ်စတီကျွန်းသို့ ရောက်ရှိလာချိန်တွင် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သစ်၊ဝါးများကို ခိုးထုတ်နေသော ထိုင်းလူမျိုး ၅၉ ဦးကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ဖယ်ရှားရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် ထိုထိုင်းလူမျိုးများအား သေဒဏ်ပေးခဲ့သည်။ များမကြာမီ ရက်အတွင်းတွင် တပ်မတော်ရေ၏ တပ်သားများသည် ခရစ်စတီးကျွန်းအနီးတွင်ရှိသော ယိုးဒယား တံငါ ၂၂ ဦး ကို ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးပြီး ထိုကျွန်းပေါ်တွင် မီးသင်္ဂြိုဟ် ခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း တပ်မတော်ရေ၏ အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ရေတပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်းဖေ
ရေတပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် သောင်းတင်
Rear-Adm. Chit Hlaing
Rear-Adm. Maung Maung win
Vice-Adm. Maung Maung Khin
Vice-Adm. Thein Nyunt
Vice-Adm. Tin Aye
Vice-Adm. Nyunt Thein
Vice-Adm. Kyi Min
Vice-Adm. Soe Thein
Adm. Nyan Tun
Adm. Thura Thet Swe
Adm. Tin Aung San
ရေတပ် စခန်း ဌာနချုပ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
မောရဝတီ ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ်
ဧရာဝတီ ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ်
ဓညဝတီ ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ်
ပမ္မဝတီ ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ်
တနင်္သာရီ ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ်
၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်(ရေ)၏ အမှတ်(၁)ရေတပ်တပ်ရင်းကို တပ်ရင်းဌာနချုပ်(၁)ခွဲ၊ သေနတ်ကိုင်တပ်ခွဲ(၃) ခွဲတို့ဖြင့် ကမ်းတက်တပ်ရင်းအဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
တပ်ရင်းအဆင့်မဖွဲ့စည်းမှီ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကာလမှစတင်ကာ တပ်စုအဆင့်၊ တပ်ခွဲအဆင့်ဖြင့် စစ်ဆင်ရေးတာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များရင်ဆိုင်လာရပါက အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း လှုပ်ရှားမှုပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ရေတပ်အရာရှိ/စစ်သည်များအား ခြေလျင်တပ်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များကို လေ့ကျင့်သင်ကြားကာ ရေတပ်တပ်ရင်းတွင် အမှုထမ်းစေခဲ့သည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် အင်အားထပ်မံရရှိခဲ့သဖြင့် သေနတ်ကိုင်တပ်ခွဲ(၅) ခွဲအထိ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။ အမှတ်(၁)ရေတပ်တပ်ရင်း၏ စစ်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်များအား အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ၎င်း၊ စစ်ရေး/စစ်ထောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား တနင်္သာရီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှ၎င်း တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ပြီး မြိတ်၊ တနင်္သာရီ၊ ကော့သောင်း၊ ဘုတ်ပြင်း၊ ထားဝယ်ဒေသများတွင် စစ်ဆင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ရသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် အမှတ်(၁)ရေတပ်တပ်ရင်း၏ စစ်ဆင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးတာဝန်များအား အမှတ်(၁၇)ခြေလျင်တပ်ရင်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ကာ တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုလည်း မြိတ်မြို့မှ တွံတေးမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ဧရာ၀တီမြစ်၀ကျွန်းပေါ်ဒေသအတွင်း ခုတ်မောင်းသွားလာလျက်ရှိသော ရေယာဉ်များလုံခြုံရေးအတွက် ရည်ရွယ်ကာ အမှတ်(၂)ရေတပ်တပ်ရင်းကို သန်လျက်စွန်းတွင် ထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အမှတ်(၂)ရေတပ်တပ်ရင်း၏ စစ်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်များအား အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ၎င်း၊ စစ်ရေး/စစ်ထောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဧရာ၀တီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှ၎င်း တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ပြီး ရန်ကုန်၊ ဟင်္သာတ၊ ဝါးခယ်မ၊ ဘိုကလေးဒေသများတွင် စစ်ဆင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ရသည်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၃၀) ရက်နေ့တွင် ရေတပ်တပ်ရင်းများ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးတာဝန်များအား အခြားနယ်မြေခံတပ်ရင်းများသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီးနောက် ရေတပ်တပ်ရင်းများအား ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ (ကိုးကား-တပ်မတော်သမိုင်း၊ ပဉ္စမတွဲ၊၁၉၆၂-၁၉၇၄)
မြန်မာ့ တပ်မတော်သည် ရေတပ်အခြေစိုက် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက် ဘိုဖော်စ် ၄၀ မီလီမီတာ နှင့် zpu-2 AAA တို့ကို အသုံးပြုသည်။
Kyan Sittha Class ရေတပ်သင်္ဘာကျင်း
(မြန်မာနိုင်ငံ) F12 - ကျန်စစ်သား
F14 - ဆင်ဖြူရှင် ၂၀၁၄
၂၀၁၅ 1× Oto Melara 76 mm Super Rapid Cannons
AK-630 6-barrel 30 mm CIWS guns
SA-N-5 SAM ( F 12 is to be fitted with TY-90)
C-802 anti-ship missiles
Rocket Launchers, possibly ASW rockets or decoy rockets Stealth shaping, with helicopter hangar,5planned
Aung Zeya Class ရေတပ်သင်္ဘာကျင်း
(မြန်မာနိုင်ငံ) F11 - အောင်ဇေယျ ၂၀၀၈
1× Oto Melara 76 mm Super Rapid Cannons
4 x AK-630 6-barrel 30 mm CIWS guns
6 × SA-N-5 SAM
8 x Kh-35E anti-ship missiles
Triple 324 mm YU-7 ASW torpedoes
Rocket Launchers, possibly ASW rockets or decoy rockets
[Type 053H1 Hudong Shipyard
(တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ) F21 -မဟာဗန္ဓုလ
F23 - မဟာသီဟသူရ ၂၀၁၂2x 100 mm gun
4 x dual 37 mm AA guns
8 x C-802 anti ship Missile
2 x Type 81 (RBU-1200) 5-tube ASW RL (30 rockets), or2x Type 3200 6-tube ASW RL (36 rockets)
2 x Type 62 5-tube A/S mortar launchers
2 x depth charge (DC) racks & projector
ကော်ဗက် စစ်ရေယာဉ်များ (Corvette)[ပြင်ဆင်ရန်]
Anawratha Class ရေတပ်သင်္ဘာကျင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) 771 - UMS အနော်ရထာ
772 - UMS ဘုရင့်နောင်
773 - UMS တပင်ရွှေထီး ၁၉၉၆–လက်ရှိ 1 × Oto Melara 76 mm Super Rapid Cannons
2 × Type 58/ZPU2Anti-aircraft Gun
1 × Type 69/AK-230 twin-barrel 30 mm CIWS gun
4 × C-802 Surface-to-Surface Missile
2 × RBU-1200 or Type 81 ASW rocket launchers
1 helipad 773 was the latest design of the class and featured the stealth shaping. Launched on 2014 and expected to commissioned in 2016.
FAC - Stealth[ပြင်ဆင်ရန်]
ကိုယ်ပျောက်သင်္ဘော ရေတပ်သင်္ဘာကျင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) 491  ၂၀၁၂ 1 × AK-630 twin-barrel 30 mm CIWS gun
4 x C-802 anti-ship missile
Creddok(AM-356) 42 - ရန်ကြီးအောင် 1967 1x76mm Cannon
2x 40mm Bofer Anti Aircraft Gun
Hedgehog Anti Submarine Destroyer အမေရိကန်ရေတပ် ရေယာဉ်ဟောင်း
FAC - Submarine Chaser[ပြင်ဆင်ရန်]
Hainan Dalian, Qiuxin and Huangpu Shipyard, 442-ရန်ထက်အောင်
450-ရန်ဇွဲအောင် ၁၉၉၁၊ ၁၉၉၃2× Type 66 - 57mm twin guns
2 × Type 87 - 25 mm twin guns
2 × Type 69 14.5 mm twin Anti-Aircraft Guns
RBU ၄၄၁၊ ရန်စစ်အောင် သည် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် နစ်မြုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ခြောက်စင်း၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် လေးစင်း
အမြန်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ် (FAC - Missile)[ပြင်ဆင်ရန်]
Houxin class Qiuxin Shipyards, ရှန်ဟိုင်းမြို့၊ 471 - မာဃ
472 - SaitTra
473 - DuWa
474 - ZeyHta
475 - ဟံသာ
476 - BanDa ၁၉၉၅၊ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၇4× C-802 Surface-to-Surface Missile
2 × 30 mm AK 230
5-Series class ရေတပ်သင်္ဘာကျင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) 556
560 ၂၀၀၄4× C-802 Surface-to-Surface Missile
5-Series class ရေတပ်သင်္ဘာကျင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) 561
570 ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၂
2 x C-802A Surface to Surface Anti-ship Missile
အမြန်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ် (FAC - GUN)[ပြင်ဆင်ရန်]
5-Series class ရေတပ်သင်္ဘာကျင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) 551
566 ၁၉၉၆၊ ၂၀၁၃ 1 × 37 mm AA gun
Large Patrol Combatants[ပြင်ဆင်ရန်]
Osprey Class-50 Danyard A/S, Frederikshavn, ဒိန်းမတ် 55 (Indaw)
57 (Inya) ၁၉၈၂ 1 / 40mm 60-cal. Bofors AA
2 / 20mm 70-cal. Oerlikon AA
PGM 43 class  Marinette Marine, Wisconsin; last two by Peterson Builders, Sturgeon Bay, WI, အမေရိကန် 401
406 ၁၉၅၉-၁၉၆၁ 1x40mm Bofor,2dual 20mm OA, 2x12.7mm MG
Y311 class - modified Y301 ဆင်မလိုက် သင်္ဘောကျင်း Y311 ၁၉၆၇ 2x40mm Bofor, 2X20mm OA Y-312 သည် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် နစ်မြုပ်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်)
Y Series class Uljanik SY, Pola, Yugoslavia 301
310 ၁၉၅၇–၁၉၆၀ 2x40mm Bofor, 2X20mm OA
Cruiser Patrol Craft[ပြင်ဆင်ရန်]
Swift class Swiftships, Morgan City, LA / Vosper, 422
423 ၁၉၈၀240 mm,220 mm,212.7 mm machine gun, Pathfinder Radar 421 သည် ပင်လယ်ပြင်တွင် ပျောက်ဆုံးခဲ့
Carpentaria class ဩစတြေးလျနိုင်ငံ 112
117 ၁၉၇၈-၁၉၈၀ MK10 AA, radar, 20mm 70cal
412 class ရေတပ် သင်္ဘောကျင်း 412
416 ၁၉၈၃-၁၉၈၄ 2x40mm AA, 2x12.7mm machine gun 415 နစ်မြုပ်ပြီး
PB-90  ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံ 424
426 ၁၉၉၀ M-75 AA, Radar, 2x quadruplet 20mm cal
Coastal Land Craft Mechanized[ပြင်ဆင်ရန်]
LCM ရေတပ် အင်ဂျင်နီယာရုံ  709
LCM ရေတပ် အင်ဂျင်နီယာရုံ  1611 ၂၀၀၅
LCM ရေတပ် အင်ဂျင်နီယာရုံ  1612
Coastal Land Craft Utility[ပြင်ဆင်ရန်]
LCU ရေတပ်သင်္ဘာကျင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) 605 ၁၉၈၄
LCU 603 ၁၉၆၃-၁၉၆၈
Coastal Survey Ship[ပြင်ဆင်ရန်]
Survey ship  Tito SY, Belgrade, Yugoslavia 801 သုတေသီ ၁၉၆၅ helipad
2 x40 mm, 2x 20 mm machine gun
Coastal Logistics and tanker Ship[ပြင်ဆင်ရန်]
coastal tanker Watenabe Zosen K.K., Hakata, ဂျပန် 608 ၁၉၉၁ မရှိ
coastal tanker Shimoda Dockyard, Shimoda, ဂျပန် 609 class ၁၉၈၆ မရှိ
coastal logistics ship ဂျာမနီ 601 ပြည်တော်အေး - ၁ ၁၉၇၅ မရှိ
coastal logistics ship ဂျပန် 602 ပြည်တော်အေး - ၂ ၂၀၀၂ မရှိ
coastal logistics ship A/S Nordsovaerftet, Ringkobing, နော်ဝေ Ayidawaya ၁၉၉၁ မရှိ
coastal transport မြန်မာ 612
618 ၁၉၉၀ AA Gun
Yadanabon မြန်မာ VIP Transport ၁၉၉၀
PBR class အမေရိကန် 211
216 ၁၉၇၈-၁၉၈၂ 1 × twin M2HB .50 caliber (12.7 mm) machine guns (forward inarotating tub)
1 × single M2HB (rear)
1 or2× M60 7.62 mm machine gun(s) (side-mounted)
1 × 40 mm Mk 19 grenade launcher
Yan Naing class Doone Htay, 501
510 ၁၉၇၀ Machine Gun, OA
Michao Class ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံ 001
025 ၁၉၆၃-၁၉၆၈ 2x20mm OA
PCE Class ရေတပ်သင်္ဘောကျင်း 217
220 ၁၉၈၉ machine gun, Bofor, AA ၄ စင်းတည်ဆောက်ပြီး
Floating dry dock[ပြင်ဆင်ရန်]
Floating dry dock တရုတ်ပြည် F001 ၂၀၁၃
Unmanned Surface Vehicle - USV[ပြင်ဆင်ရန်]
Unmanned Surface Vehicle မြန်မာ ၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်၊ ၆၇ နှစ်မြောက်ရေတပ်အခမ်းအနားတွင် ပြသ 
↑ ၁.၀ ၁.၁ AMR NAVAL DIRECTORY 2011
↑ ၄.၀၀ ၄.၀၁ ၄.၀၂ ၄.၀၃ ၄.၀၄ ၄.၀၅ ၄.၀၆ ၄.၀၇ ၄.၀၈ ၄.၀၉ ၄.၁၀ ၄.၁၁ ၄.၁၂ ၄.၁၃ ၄.၁၄ ၄.၁၅ ၄.၁၆ ၄.၁၇ ၄.၁၈ ၄.၁၉ ၄.၂၀ ၄.၂၁ ၄.၂၂ ၄.၂၃ ၄.၂၄ ၄.၂၅ Maung Aung Myoe, Building the Tamadaw
↑ ၅.၀၀ ၅.၀၁ ၅.၀၂ ၅.၀၃ ၅.၀၄ ၅.၀၅ ၅.၀၆ ၅.၀၇ ၅.၀၈ ၅.၀၉ ၅.၁၀ ၅.၁၁ ၅.၁၂ ၅.၁၃ ၅.၁၄ ၅.၁၅ ၅.၁၆ mmmilitary.blogspot.com/
↑ ၆.၀ ၆.၁ Burmese Navy Decimated in Cyclone
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ mmmilitary.blogspot.com
↑ ၉.၀၀ ၉.၀၁ ၉.၀၂ ၉.၀၃ ၉.၀၄ ၉.၀၅ ၉.၀၆ ၉.၀၇ ၉.၀၈ ၉.၀၉ ၉.၁၀ ၉.၁၁ ၉.၁၂ ၉.၁၃ ၉.၁၄ The Naval Institute Guide to Combat Fleets of the World: Their Ships By Eric Wertheim
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ http://www.myawady.com.mm/photonews/item/11344-2013-04-10-13-50-55
တပ်မတော် (ကြည်း) • တပ်မတော် (ရေ) • တပ်မတော် (လေ) • လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တပ်မတော်_(ရေ)&oldid=372170" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဇွန် ၂၀၁၇၊ ၀၇:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။